Ukungathembeki njalo waqonda njengoba ukungathembeki komuntu oshade naye futhi usizi kube. Kungakhathaliseki ukuthi umbhangqwana uzothola amandla anele kanye nesifiso zonke induku ndawonye ukwakha noma iba yingxenye yomhlabathi, ukuphinga libuhlungu. Bobabili. Akhonza uyazibuza "kungani abafazi ukushintsha" kungaholela njengesibonelo yemisebenzi kakhulu izincwadi, amabhayisikobho, amelela abesifazane emhlabeni ngokungakhethi. Abakwazi qala nesitha "imvelo ezimbi besifazane", okuyinto organically ayikwazi ukwenza noma bathembeke uthande ngokungenabugovu. Noma izithombe temptress Lilith courtesan Messalina - uhlobo Vamp, subjugates amadoda futhi baphike intando yabo. Kodwa kaningi umbuzo kufanele sibeke ehlukile: hhayi "Kungani ukushintsha unkosikazi," nokuthi ngokukhethekile inyunyana kwaholela zokungethembeki.
Kulula kakhulu "ukuhumusha imicibisholo" ngakolunye. Ngokuvamile engazi abaqondi eziyisisekelo eziyisisekelo the Psychology abesifazane, ukukhohliswa (Noma cabanga bona njengoba enjalo) Amadoda aphonse izandla zabo, ukushaja nenganono, lampoons ukubhala ngoba bangaqondi ukuthi kungani unkosikazi wakhe washintsha. Bona eqinisweni alindele nabangane bawo ubumsulwa, ubuqotho, ikhono izitike futhi ukwanelisa zonke izidingo zabo, kanye sexy futhi ekhangayo. Kodwa - esilinganisweni, umyeni wakhe kuphela. Futhi eqinisweni, bona, engazi ukuthi kungani ushintsho lomkakhe Eqinisweni, ukukholelwa ukuthi le ndaba ukuthi badume, imali, ukungabi nasimilo, noma into esobala kakhulu futhi emathafeni. Kulezi zibona netiphetfo ayashalazelwa ngokuphelele into ebaluleke kakhulu: ngokuphinga okwenzekile senzeka lapho kungekho ukwaneliseka nobuhlobo bebonke. Ngemva kwalokho inyunyana esenamandla futhi enokwethenjelwa, futhi laba ababili uzizwe sengathi zadalwa ngomunye nomunye, idingeka kwedivayisi ngokwengqondo hhayi kuphela. Wena kudingeka ukuba ube nombono ezivamile imigomo, injongo yokuphila. Kudingeka sigxile izidingo uzakwethu, futhi kaningi ngaphezu hhayi yezimali nezinto ezisetshenziswayo nezingokwengqondo. Uma unkosikazi ukukopela, yena ngokuvamile azizwa engajabule emshadweni. It lidinga njalo bahlekwa usulu noma limane lifakwe ngemuva. Ngo-mthetho uphalafini emlilweni: "Yena uyobhala ku like unodoli", "Unguye umndeni inikeza." Kodwa thina bayalibala ukuthi into ebaluleke kakhulu, okuyinto abantu ukuhlobanisa ifindo. Angabe esaba ukuba banake nomunye nokusekelwa. Okubuhlungu nakakhulu is obuzwiwa abesifazane. Uma amadoda bathethelele ukungathembeki kwabo ngokuvamile isidingo ukwehluka ngokobulili, ukutadisha kungani ushintsho umkakhe, bonisa ukuthi, njengoba umthetho, umshado awusona uthando ngokwanele nokunakwa. ukuntuleka zokuxhumana, uthando, iletha e ubuhlobo nomuntu oshade naye ushayela kubo ukuthi yini okumelwe siyibheke ukwamukelwa nokwamukelwa ngaphandle.
Lokhu ngenhlanhla kuyinto ungungoti kakhulu ekusebenziseni zonke izinhlobo Alfonso nabakhohlisi okhokhelwayo. Ukwazi isidingo salowo nalowo muntu wesifazane ukunakwa kuphela imvume yakhe nenhlonipho, bayakwazi ngobuciko lokusizakala ngemizwa isisulu. Maye lutho, ngubani ayothatheka lolo we isiseshi ezifana imali lula. Kodwa ngokuvamile, ukukhungatheka ngenxa abesifazane emshadweni, ngenxa yalokho, ukuzwela yayo kunoma udumo, namandla kangangokuba lungakwazi ngisho has wathatheka kuye ukuthi kuphela udlala. Amakhosikazi ngokuvamile ukushintsha ngenxa yezizathu ngokomzwelo. Futhi abayeni babo kuphela, uma ngempela, uyakwazi ukunakekela kwabo futhi uthando ukuvimbela zokungethembeki.
Peacock Feather ekhaya umhlobiso
Ukubhaka Tasty e multivarka ngokushesha. Ungadliwa ophaya elungisiwe kanye nama-dessert
Irina Abramovich: Biography, amaqiniso okuphila, izithombe